Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Ivory Coast Didier Drogba Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ
LB na-egosi akụkọ zuru oke nke akụkọ football na ihe ndekọ ego nke ama aha ya bụ "Tito".
Ụdị anyị nke Didier Drogba's Biography Facts, gụnyere akụkọ nwata ya, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe omume ndị ama ama n'oge ọ bụ nwata. Anyị na-aga n'ihu ịgwa gị otú Didier si bụrụ onye a ma ama.
Nyocha nke Ivorian na Chelsea FC Football Legend gụnyere akụkọ ihe mere eme ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ ndị na-apụ na ihe ndị a na-amaghị ama.
Ọtụtụ nde ndị na-akwado bọọlụ gburugburu ụwa na-enwe mmasị na Didier Drogba. Ọtụtụ ndị na-egwu egwu na-anwụ anwụ na-ahụ ya dị ka nanị akụkọ egwuregwu football nke nwere ọchịchọ na-enweghị atụ, nke siri ike karịa talent nke Lionel Messi na C. Ronaldo.
Ugbu a, ka anyị malite n'isi isiokwu nke isiokwu a.
Didier Didier Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Maka Biography Starters, aha ya bụ 'Tito' nke pụtara 'Giant'. A mụrụ Didier Drogba na aha ya bụ Didier Yves Drogba Tébily na Machị 11, 1978.
Amuru ya na Abidjan, Côte d'Ivoire. Ọbịbịa ndị na-akụ obere na Ivorian abụọ nwere ịhụnanya na etiti 1970s mere ka ọbịbịa ụwa a.
Didier Drogba n'oge ọ bụ nwata tolitere n'ime obodo ebe ọnọdụ ibi ndụ siri ike dị. Ndụ nwata ya hụrụ ọtụtụ agụụ nke kpagburu onwe ya na ezinụlọ ya.
Ọnọdụ akụ na ụba a mere ka ọtụtụ puku ndị Ivori gbapụ n'obodo ha maka ịta ahịhịa na France. A hụrụ France n'oge ahụ dị ka ebe mgbaba maka ndị si mba ọzọ kwagara Ivor.
Didier Drogba, n'oge ọ bụ nwata, nwere erighị ihe na-edozi ahụ nke na-egbochi ma uto anụ ahụ na nke uche ya.
Nne na nna ya (Albert na Clotilde Drogba) gbara mgba na ọrụ ụlọ akụ mpaghara ha, nke na-enweghị ike itinye nri dị ukwuu na tebụl.
Maka ha, nanị olileanya bụ ichere maka ego ndị otu onye ikwu na ndị bọọlụ France (Michel Goba) kwere nkwa.
Michel Goba so na ndị mbụ kwabatara na France n'ihi ihe isi ike na obodo Ivory Coast.
Ego ndị a tụrụ anya n'aka ya bụ iji nyere aka njem Didier na France, nke e mere atụmatụ ọbụna mgbe ọ dị afọ 5.
A maara nwanne nna Didier Drogba 'Michel Goba' na ọ nwetara ohere na France mgbe ọ gbapụrụ obodo ya.
Ọ biri dị ka onye na-agba bọọlụ na klọb nkewa dị ala 'Adaeze Brestois 29 ′. N'oge ahụ, France tinyere ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ndụ gbara ọsọ ndụ ojii.
Micheal Goba (Nwanne nna Didier Drogba).
Na mgbakwunye na izipu ego, enwere olile anya na Michel Goba (nwanne nwanne Drogba) ga-abịarute Ivory Coast, gaa leta Didier wee buru ya n'akụkụ France.
Gị, olileanya a dị mkpirikpi ka France jụrụ Michel Goba visa ịga leta Ivory Coast. Nke a hapụrụ ya naanị nhọrọ nke izipu ego nke nwere ike ị nweta nhazi visa maka otu onye.
Mgbe ọtụtụ ezinụlọ kwurịtara okwu, ha kpebiri na obere Didier ga-eme njem naanị ya na France. Alonega njem naanị ya na-atụ Didier ụjọ. Ọ bụ njem dị ịtụnanya maka nwatakịrị nwoke dara ogbenye nke na-ahụbeghị ma ọ bụ banye n'ụgbọelu n'oge ndụ ya niile.
N'elu ọdụ ụgbọ elu mgbe ọ na-apụ, ndị mụrụ Didier tinyere aha ya n'olu ya; 'DIDIER DROGBA IZU MICHEL GOBA NA PARIS'.
Dị ka o kwesịrị, mkpado a mere ka onye ọ bụla nọ n'ọdụ ụgbọ elu lelee ya anya, si otú a na-eche otú ndị nne na nna ya si achọsi ike ịchụpụ ya na mba ahụ.
Didier Drogba mgbe ọ bịarutere France zutere nwanne nna ya nke ji ndidi chere ya na ọdụ ụgbọ elu Charles de Gaulle.
Mbido Didier Drogba na France mgbe ọ dị afọ 5.
Didier Drogba Biography - Ihe Isi Ike Mmalite Ndụ na France:
Ọnwa ole na ole ka Didier Drogba rutere France, ndị mụrụ ya na Ivory Coast mere mkpebi. Ha chere n'echiche na nwa ha kwesịrị ilekwasị anya na agụmakwụkwọ ma ghara ịghọ ndị ịgba ọsọ dịka nwanne nna ya mere.
Otú ọ dị, echiche Goba dị iche. Ọ chọrọ Didier ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ dị ka ya. Michel Goba kwadoro ịkwado Didier na-eto eto na ụlọ akwụkwọ mmuta na France.
Didier Drogba na Football Academy (Age 6).
N'ọtụtụ oge, nne na nna Goba na Didier ekwekọrịtaghị n'ịchọpụta ọdịnihu nwatakịrị ahụ.
Otú ọ dị, e mere mkpebi na njedebe. E kwetara na Didier Drogba kwesịrị ịgwakọta football na agụmakwụkwọ.
Didier Drogba ga-akwusi na ulo akwukwo mmuta ma debanye aha ya na ulo akwukwo nke ndi otu aka.
N'oge a, enwere ohere iji mix ma agụmakwụkwọ ma na-egwu obere football.
Mgbe ọ nwụsịrị ntakịrị na France, Didier Drogba ghọrọ onye na-enweghị isi na nwanne nna ya. O doro anya na ọ malitere ịla ụlọ n'oge na-adịghị anya mgbe ọ bịarutere France.
Mgbe a gbara ajụjụ ọnụ n'oge na-adịbeghị anya banyere nke a, Didier Drogba nwere ihe a iji kwuo;…
'Ana m echeta oge m bụ nwata na France. Ebere m ákwá kwa ụbọchị. Ọ bụghị n'ihi na m nọ na France - enwere m ike ịnọ ebe ọ bụla - mana n'ihi na m nọ ebe dị anya, nke dị anya site na ndị mụrụ m. Mma ntaba mmọ etieti. '
Didier Drogba diri naanị afọ atọ tupu ya ahapụ France na nwata. O ji obi ike gwa nwanne nna ya banyere ọchịchọ ya ịlaghachi Ivory Coast iji soro ndị mụrụ ya.
Mgbe ọ chọpụtara na ọ nweghị ike ịlụ ọgụ ọzọ, nwanne nna Didier were iwe nye ya ọchịchọ a. O wetara ego ma nye ya ụgbọ elu. Nke a hụrụ Didier Drogba ịlaghachi n'ụlọ iji nọrọ na nne na nna ya na Abidjan.
Didier Drogba Biography - Francehapụ France maka Africa:
N'ụzọ dị mwute, nlọghachi nke Didier Drogba na obodo ya mgbe ọ dị afọ 8 emeghị nke ọma. Ivory Coast ka nọ na elu nke ọdịda akụ na ụba n'oge nloghachi ya.
Ọnọdụ ahụ ruru n'ókè nke ndị mụrụ ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ya. Nke a mere ka Didier kwụsị agụmakwụkwọ ya.
N'oge ụfọdụ, Didier Drogba malitere ịkụ bọl na ọkwa mpaghara. Ọ malitere ịga n'egwuregwu football dị nso iji zụọ ya na ndị enyi ya. Nke a ka o mere ruo afọ atọ ruo mgbe ọ bụ 11.
Mgbe ọ dị afọ 11, nne na nna Didier Drogba kwụsịrị ọrụ ha. Oge a, oge okpomọkụ nke akụ na ụba akụ na ụba nke Ivory Coast enweghịzi ike ịbụ ajị agba.
N'ịbụ ndị kwara ụta maka ịhapụ nwa ha nwoke ka ọ hapụ France, ndị mụrụ Didier Drogba ji ihere bịakwute Michel Goba ọzọ maka enyemaka. Didier Drogba n'otu oge ji aka ya kweta mmejọ nke ịhapụ France.
N'ụzọ dị mma maka ya, Uncle Michel Goba zara ma ziga ego maka Didier Drogba ka ọ bịa France nke abụọ.
Didier Drogba Biography Eziokwu - Nke Abụọ Na-abịakwute France:
Mgbe ọbịbịa ya nke abụọ na France, Deede Michel Goba ka na-asọpụrụ ọchịchọ nne na nna ya ka ọ gaa n'ihu ọmụmụ ihe ya. Goba kpebiri itinye Didier Drogba n'ụlọ akwụkwọ. Ọ kụzikwaara ya ihe ndị dị mkpa iji gbaa bọl.
N'ihi ịchụso agụmakwụkwọ, Didier nọgidere na-agba bọl na ọkwa ntorobịa ebe ọ na-egwuri egwu dị ka azụ azụ.
Nwanne nna ya Michel Goba jikọtara ya na ụlọ ịgba egwu ntorobịa 'Levallois SP' na 1993. O nyeere aka na -eme akwụkwọ ịgba bọọlụ Didier Drogba dị ka a hụrụ n'okpuru.
Akwụkwọ akwụkwọ nke Didier Drogba (Age 14) sochiri ntorobịa ntorobịa ya na Le Mans.
Didier Drogba n'oge a lekwasịrị anya na football oge ọ na-agụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ sekọndrị, ọ gara n'ihu ịchụso Degree na Ana-ekwu okwu na Mahadum Maine. N'otu oge ahụ, ọ jikọtara agụmakwụkwọ ya na football na Le Mans.
Didier Drogba nwere mmasị karịa ịmalite akara ogo ego ya tupu ya ewere oge zuru ezu.
Onye Akaụntụ Akaụntụ Akaụntụ:
Didier Drogba achọghị ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ ruo mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ. O doro anya, Didier Drogba nwetara Degree Accounting na afọ nke 21. Taa bụ onye na-edekọ ego na-akwụ ụgwọ.
Mgbe ọ dị afọ 21 mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ nyocha, Didier kpebiri ilekwasị anya na football. Nke mbụ, ọ rụrụ ọrụ ikike igwu egwu ọgụ.
Nke a hụrụ ya ka ọ na-atụgharị gaa n'ihu kama ịga azụ azụ. N'oge ahụ, enwere ọtụtụ ndị egwuregwu karịa ya. Ha nwere ezigbo talent. Gị, ọchịchọ Didier Drogba siri ike karịa talent ha.
Hardrụsi ọrụ ike ya mere ka ọ nyefee ya na Guingamp na 2002, bụ ebe o nyeere klọb aka izere ịbanye na ngalaba nke abụọ.
Ihe omuma a nyekwara ya aka na Marseille maka oge 2003-04, ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ 19 na egwuregwu 35 iji merie French Ligue 1 Player nke Year.
Mgbe ọ rụsịrịla n'egwuregwu ya, ọtụtụ klọb ndị isi Europe lekwasịrị 26 afọ, Chelsea wee kwụọ ụgwọ mbufe nke ihe dịka $ 36 maka ọrụ ya na 2004. Ihe ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme!
Nne na nna Didier Drogba achọghị ka football:
Chelsea FC Legend hụrụ nne ya n'anya, Clotilde Drogba na papa, Albert Drogba.
N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị mgbe ha kwadoro ka ọ banye na football site na mmalite. Drogba, ị kwanyere ọchịchọ ha ùgwù site na inweta Degree Accounting na kwa, na-egosi na ha mehiere.
O mere ka ha kwenye na football nwere ike iwetara ya ihe ịga nke ọma dịka ọ dịla. Taa, ha na-enweta elele nke ihe ịga nke ọma ya. Ọ dịghị onye na-anụ ọtụtụ ihe banyere Michel Goba ụbọchị ndị a.
Ndị nne na nna Didier Drogba.
Kasị Mma African Footballer:
Afrika nile hu Didier Drogba anya kemgbe o mere egwuregwu izizi nke mba uwa maka ndi otu Ivory Coast na 2002.
Maka ọtụtụ ndị na - agba bọọlụ, Didier Drogba bụ onye kachasị ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama. 'Ekele dịrị Chelsea FC'. Akpọwo ya aha onye egwuregwu bọọlụ n'Africa ugboro abụọ (2006 na 2009).
Ọ bụ ya kpatara katapila ndị otu mba ya, nke a na-akpọ "Enyí ndị ahụ," banye na asọmpi iko mba ụwa na nke mbụ na 2006, na ọzọ na 2010.
Agbanyeghị na enyí ahụ emeghị otu ahụ otu ugboro. Gị onwe ha dị n'egwuregwu bọọlụ kacha ukwuu mere ndị agbụrụ ha si Africa obi ụtọ.
Didier Drogba Biography - ppingkwụsị Agha Obodo:
A na-akpọkarị akụkọ banyere bọọlụ 'Onye Ọchịchị nke Udo ' site na ndị ọgbọ na ndị fan.
Ikike Didier Drogba nwere ike ime ka ndị obodo ya kwusi ịkwụsị ihe a gaara akpọ Agha Obodo doro anya mere ka a kpọọ ya n'etiti 'mmadụ 100 ndị kacha nwee mmetụta n'ụwa' site na Magazin Oge.
Dika onye ama ama ama na obodo ya, o jiri nguzo ya mee ihe di nma mgbe obodo ya no na agha agha obodo.
Nke a bụ ihe mere n'ezie;
Dịka agha obodo dara na Ivory Coast na 2006, Didier Drogba duru ndị Elephants n'ekpere maka udo mgbe egwuregwu egwuregwu nke World Cup.
Ọ hazikwara nkwupụta otu na-akpọ maka njedebe agha ahụ. Enyere mgbalị a iji nyere aka weta nkwụsị n'etiti otu egbe dị na Mba.
Omume a weta udo nye ndị isi ọdịnala niile na-ewute obodo ya. Na njedebe, agha Post-Civil nke ga-egbu ndụ puku kwuru puku.
Ikwọ thezọ Africa:
N'agbanyeghi na o biri otutu ndu ya na mba ndi di na Europe, o nweghi mgbe o bula wezugara onwe ya n'omenala Africa. Nke a na-agụnye ịbụ abụ nke mba ya kachasị mma dị ka abụ iwu mmanye mgbe a gwara ya ka ọ bụrụ abụ mgbe ị bịarutere n'otu ọgbakọ ọhụrụ.
Dọ aka na Chelsea FC Nwanyị nta akụkọ:
Maka Didier Drogba, inwe obi uto bụ obi ụtọ nke anụrị. Untingkọ akụkọ banyere nwanyị nwanyị nke Chelsea, abụghị ihe ọhụrụ nye ndị na-egwu egwu. Gị, ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị ikwu okwu ọma banyere ya.
Itinye Aka na Ime Anwansi:
Tupu akpa iko ụwa ha, ìgwè ndị Ivory Coast mere ndekọ na Magic System Local Band. N'ebe a, Didier Drogba gosipụtara ụwa na ya nwere ike ịbụ abụ ma kpọọ football.
Onye Ndú Otu Mba:
Ndi otu ndi otu ndi otu ndi otu ndi otu ndi Didier Drogba maara nke oma ihe idi n'otu. Naturedị ha dị iche na enweghị ike iji ya tụnyere ndị otu mba Africa.
Ha na-atụgharị uche ma na-eme dị ka ezigbo ụmụnne. Didier Drogba onye a na-ahụkarị dị ka eze nọ mgbe niile n'etiti ihe niile.
Ajụjụ ọnụ nke Thierry Henry:
Nụrụ ihe Didier Drogba nwere ikwu maka ịmalite ịgba egwu football na ahụmahụ ya na-egwu n'Africa. Lelee anya;
Ice ịwụ Chama Aka:
Didier Drogba hụrụ ihe ịma aka ịwụ ice. Ọ na-eme nke ahụ iji kwalite onyinye nyocha na ịmara banyere ọrịa amyotrophic lateral sclerosis. Lelee n'okpuru;
Didier Drogba Biography Eziokwu - Super Mum Cooks maka National Team:
Mama Didier Drogba ka na-ele anya 'Nwatakịrị na Super'. Nne nke Cote d'Ivoire na-edu otu ìgwè ndị inyom na-esi nri maka ndị otu mba na ndị na-akwado ha.
Clotilde Drogba nwere mmasị ịrụ ebe obibi ọdịnala nke agwa, ofe ose, osikapa ọcha na stew.
Dị ka ya si kwuo, Enwere m mmasị inye aka na mba m site na inye ndị na-akwado otu egwuregwu na ndị egwuregwu bọọ n'efu. Ihe oriri m na-enye ndị na-akwado ume ike iji mee ka otu anyị nwee mmeri '.
Kwa ụbọchị egwuregwu, ọtụtụ narị ndị na-akwado Elephats kwụ n'ahịrị na efere efu iji kpokọta nri n'efu na nne nke onye ọkpụkpọ egwuregwu Ivorian kachasị nwee mmetụta. Ha na-eme nke ahụ tupu ha agaa ebe a na-eguzosi ike na-abụ abụ ma kụọ aka.
Didier Drogba Biography - Ire nke Iwe:
N'agbanyeghị na ọ bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Didier Drogba nwekwara ike ịme ara. Vidio dị n'okpuru na-ekpughe oge ọ tụfuru jụụ.
Dị ka Didier Drogba si tinye ya, "Nke a nwere ike ime mgbe enwere mmetụta nke m ma ọ bụ ndị otu m".
O kwuru otu mkpịsị aka na onye ọka ikpe Tom Henning Ovrebo mgbe agbachitere Njikọ Njikọ na Barcelona. Iwe a dị ka egosiri n'okpuru ebe a na-egosi Didier Drogba na-arahụ ara.
Idozi Esemokwu Ezinụlọ Maka Enyi:
Ọ dụwo ndụmọdụ ma nyere enyi ya Togo nọ ná nsogbu aka 'Emmanuel Adebayor'dozie nsogbu ezinụlọ ya.
Chris Cohen na-akụzi Didier otú eji Guitar ma kpọọ abụ ya nke ndị ọkpọ na-akpọ mgbe ha na-eme egwuregwu, wee soro ya na-abụ abụ n'oké ọhịa. Lee n'okpuru;
Didier Drogba Ndụ Ndụ:
Ee, na-erughị ihe ndị mmadụ tụrụ anya ya, Didier Drogba biri maka otu nwanyị si n'obodo ya bụ Côte d'Ivoire. Ọ lụrụ Diakité Lalla, nwanyị Malian nke ọ zutere na Paris, di na nwunye ahụ nwekwara ụmụ atọ.
N'okpuru ebe a bụ foto nke agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ Didier Drogba nke emere na Abidjan.
Idimụaka Didier Drogba:
N'okpuru ebe a bụ Isaac Drogba (nwa mbụ nke Didier) na Iman Drogba (Nwa mbụ na naanị nwa nwanyị). Isaac Drogba gbara bọọlụ na Chelsea n'okpuru afọ iri na anọ.
Ọkpara ya, bụ Isaac, ka amụrụ na France n’afọ 1999, mana o tolitere n’England ma bụrụkwa onye egwuri egwu na usoro agụmakwụkwọ Chelsea.
Didier Drogba nwekwara nwa nwoke ikpeazụ a kpọrọ Kieran Drogba. A mụrụ ya na 2010.
Nwa Didier Drogba - Mmekọrịta ya na Isaac Drogba:
Didier hụrụ n'anya n'ezie ime ememe nwa ya. Isaac (nke dị n'elu) dị afọ 17 ugbu a n'oge edere isiokwu a.
Nwa Didier Drogba Isaac chọrọ ịgbaso nzọụkwụ nna ya na Chelsea mana ọ na-ezube ịnọchite anya England na ọ bụghị Ivory Coast. Ọbụna ọ kpọrọ France.
Didier Drogba si ebi ndụ - Isoro Ezinaụlọ nọrịa:
Didier Drogba nwere mmasị iji nwunye ya na ụmụ ya gaa ezumike na ụgbọ mmiri ya dị oke ọnụ. A hụrụ ndị ịgba ama ama ama ama na uwe elu egwuregwu nwere ihe osise nke Mike Tyson gafee n'ihu ka ọ na-enwe ọ aụ ụbọchị na St Tropez na ya ezinụlọ.
Didier Drogba Rihanna Akụkọ nke:
A hụrụ Didier Drogba ka ọ na-agbatị na Rihanna. Nke a bụ mgbe mmeri Champions League nke Chelsea.
Didier Drogba Biography - Onye Nwụrụ Ike Nwụrụ Anwụ:
N'ezie, Didier Drogba dị njikere ibi, lụọ ọgụ ma nwụọ maka Chelsea FC. Ọ bụ eziokwu na akụkọ mgbe ochie nke Chelsea biara mmiri, bia anyanwụ. Anyị na-ewetara gị otu n'ime 'yaNa-agwụ ike' oge.
Didier Drogba Frank Lampard Mmekọrịta:
Didier Drogba gosipụtara ịhụnanya ya mgbe niile Frank Lampard. N'oge ụfọdụ, ọ kachasị n'oge ememme, ọ na-abụkarị omume a na-ahụkarị nke ịbụ abụ 'Super Frank' abụ ndị Chelsea fans.
Nke a mere ụbọchị e wetara iko Champions League ha n'ụlọ. Ndị enyi abụọ bụ ndị akwụ ụgwọ. Lelee n'okpuru;
Didier Drogba Roman Abramovich Mmekọrịta:
Didier Drogba nwere ezigbo mmekọrịta Roman Abraham (Onye nwe Chelsea FC).
Njirimara njirimara anyị nke Didier Drogba.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ezie na oge ya na Chelsea hụrụ njedebe ya, icheta ya ga-adịru mgbe ebighị ebi.
Sunday Ikize Ajia
Enweghị atụ Drogba! Mana kedu ihe mere iji chefuo egwuregwu niile o meriri? Naanị ndị mmeri otu egwuregwu kwuru.
Antubioh bụ Fonkem primus
kediegwu, enwere m obi ụtọ. Ana m enwere nwoke n'anya mgbe niile, m ga-anọgide na-eme nke a karịsịa na njikọ ya na iwepụ agha obodo nke gaara egbu ndị mmadụ. Ka Chineke nọgide na-eduzi ya.